Home » Vaovao momba ny fahasalamana » Vaksinin'ny COVAX voalohany any Afrika: Rariny sy ara-drariny?
Moa ve tranga trangana vaksinina tokana atokana atsy Afrika raisina any Afrika ity tranga lehibe ity satria afrikanina ny ankamaroan'ny firenena mbola miandry handray vaksiny?
Ny olan'ny fizarana vaksiny mitovy ny fitsapana ara-pitondrantena lehibe indrindra atrehan'ny fiarahamonina manerantany.
Ny fizarana mafy tsy mitovy dia mampitombo ny fifindra-monina any amin'ireo firenena izay mandray azy ireo amin'ny kely na tsy betsaka, ary izany dia manohana ny fisian'ny mutation vaovao.
Ny fiatraikany amin'ny fihanaky ny aretina dia mety hanimba ny vokatry ny politikan'ny vaksinin'ny firenena manankarena.
Efa ho telo volana taorian'ny fanaovana vaksiny voalohany tany Angletera dia nisy vaovao tena tsara ho an'i Afrika fa omaly dia nahazo 900,000 dosie i Sodana voalohany. Izany dia natambatry ny UNICEF tamin'ny rafitry ny programa COVAX. Vaovao mahafaly fanampiny ny fanambarana fa rahampitso i Oganda dia handray fatrany 854,000 fatra voalohany, izay ampahany ihany koa amin'ny 3.5 tapitrisa antenaina horaisiny ao anatin'ny rafitr'io programa io.
Ity vaovao tsara sy nandrasana hatry ny ela ity dia tsy mamela ny famoahana vaksininy tsy mitovy hampidirina ao ambanin'ny karipetra, izay vokatry ny fanangonam-bolan'ny firenena manankarena indrindra, ny politikan'ny orinasa mpamokatra fanafody, ary ny fahalemen'ny firenena izay tsy misy fiantraikany amin'ny firenena ambany indrindra ihany. Nandritra ny fidirana an-tserasera tamina tranonkala viralin'ny Parlemanta eropeana, dia nanitatra ny fiampangana ny fahalemena ho an'ny Vondrona Eropeana sy ny filohany, Ramatoa Ursula van Leyden, Ramatoa Manon Aubry, ary nanintona ny saina ho amin'ireo andininy tsy fantatra loatra momba ireo fifanarahana vaksinina.
Betsaka ny fangatahana fampiatoana ny zon'ny fananana ara-tsaina (IPR) an'ireo vaksiny, farafaharatsiny mbola mitohy ny areti-mandringana COVID-19. Ny fikambanana iraisam-pirenena mahay momba an'io raharaha io dia ny World Trade Organisation (WTO) izay ao amin'ny fivorian'ny filankevitra jeneraly sy ny komitiny, izay kasaina hatao ny 1 - 5 martsa, dia heverina fa handray fanapahan-kevitra momba ny tolo-kevitr'i India sy Afrika atsimo izay manana ny patanty sy Ny IPR hafa momba ny zava-mahadomelina, ny fitsapana diagnostika ary ny vaksinin'ny COVID-19 dia ajanona mandritra ny fotoana maharitra ny areti-mandringana.
Nahazo fanampiana avy amin'ny World Health Organization (OMS) ary nataon'i Médecins Sans Frontières (MSF), izay ny filoha iraisam-pirenena, Andriamatoa Christos Cristou, dia nangataka ny fanohanan'ny filohan'ny Vondrona eropeana sy ny praiminisitra italiana Andriamatoa Mario Draghi, mba hankatoavana ny volavola. Tsy nahy ny fanondroana ireo olona nanatrika. Eny tokoa, ny firenena eropeana dia mandrafitra ny ankamaroan'ny vitsy an'isa amin'ny mpikambana ao amin'ny WTO izay manohitra izany fepetra izany.
Tampa's Epicurean Hotel dia nanendry General Manager & Chef Executive